မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သည် မော်လမြိုင်မြို့တွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာ့အရှေ့တောင်၏ အကြီးဆုံး တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကို ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတိယမြောက် တည်ထောင်သော ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ထိုတက္ကသိုလ်သည် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့နှင့် သိပ္ပံဘွဲ့များ၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့များကို ချီးမြှင့်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ပေးနိုင်သော တက္ကသိုလ်အချို့သာရှိရာ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သည် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်။
မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ်၏ အမှတ်တံဆိပ်
ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ အောင်မြတ်ကျော်စိန်
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ မီမီစိန်
တည်နေရာ တောင်ဝိုင်းလမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
အားကစားအသင်း Mawlamyine University Badminton Club (MUBC)
Mawlamyine University Judo Club
၂ ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပေးမှု
၃.၁ အုပ်ချုပ်သူများ စာရင်း (၁၉၅၃ မှ ယခု)
၄.၁ အရေးကြီးသော အဆောက်အဦးများ
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကို ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ လက်အောက်ခံ မော်လမြိုင် ဥပစာကောလိပ် အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင် ဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်အဖြစ် ပြောင်းလဲတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
မြန်မာ့ တက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်တွင် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များအား အတူတကွ ပေါင်းစည်းထားခဲ့ပြီး မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သည် ရိုးရိုးဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်များနှင့် သိပ္ပံဘာသာ အထူးပြု ကျောင်းသားများအား ဝိဇ္ဇာဘွဲ့များနှင့် မဟာဘွဲ့များကို ချီးမြှင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ရိုးရိုး Bachelor Of Art(BA) ဝိဇ္ဇာဘွဲနှင့် Bachelor Of Science(BSc) သိပ္ပံဘွဲ့ ရယူနိုင်ရန်အတွက် သုံးနှစ် အချိန်ပေးရပြီး BA(Hons) နှင့် BSc(Hons) တို့ကဲ့သို့သော ဂုဏ်ထူးတန်း(Honor Degree)များအတွက်ကိုမူ ၄ နှစ်အချိန်ပေးရလေသည်။ ဥပဒေပညာအတွက်မှာမူ ၅ နှစ် အချိန်ပေးရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဘွဲ့ချီးမြှင့်သည့် တက္ကသိုလ်မှာ အနည်းငယ်မျှသာရှိသည့်အနက် မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ကမ်းခြေနှင့် ဆက်စပ်နေသော မြို့တစ်ခုဖြစ်သည့် မော်လမြိုင်မြို့တောင်ဘက် ၆၀ ကီလိုမီတာအကွာတွင် တက္ကသိုလ်၏အဏ္ဏဝါသပ္ပံလက်တွေ့စမ်းသပ်ရန်နေရာတစ်ခု ထားရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
မြန်မာစာ ဘီအေ(BA) အမ်အေ(MA) --
အင်္ဂလိပ်စာ ဘီအေ(BA) အမ်အေ(MA)
ပထဝီဝင် ဘီအေ(BA) အမ်အေ(MA)
သမိုင်း ဘီအေ(BA) အမ်အေ(MA)
ဒဿနိကဗေဒ ဘီအေ(BA) အမ်အေ(MA)
စိတ္တဗေဒ ဘီအေ(BA) အမ်အေ(MA)
ရုက္ခဗေဒ ဘီအပ်စီ(BSc) အမ်အပ်စီ(MSc)
ဓာတုဗေဒ ဘီအပ်စီ(BSc) အမ်အပ်စီ(MSc)
အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ ဘီအပ်စီ(BSc) အမ်အပ်စီ(MSc) PhD
သင်္ချာ ဘီအပ်စီ(BSc) အမ်အပ်စီ(MSc)
ရူပဗေဒ ဘီအပ်စီ(BSc) အမ်အပ်စီ(MSc)
သတ္တဗေဒ ဘီအပ်စီ(BSc) အမ်အပ်စီ(MSc)
ဘူမိဗေဒ ဘီအပ်စီ(BSc) -- --
ဇီဝဓါတုဗေဒ ဘီအပ်စီ(BSc) -- --
အဏုဇီဝဗေဒ ဘီအပ်စီ(BSc) -- --
ဥပဒေပညာ LLB LLM --
အုပ်ချုပ်သူများ စာရင်း (၁၉၅၃ မှ ယခု)ပြင်ဆင်
ဦးတိုးအောင် (စာရေးဆရာ ကုသ) (၁၉၅၃ခု မတ်လ မှ ၁၉၆၃ ခု ဇူလိုင်လ)
ဒေါက်တာမောင်ဒီ (၁၉၇၂ မှ ၁၉၇၇)
ဦးခင်မောင်တင့် (တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်) (မော်လမြိုင် ဒီဂရီ ကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ကြီး (၁၉၇၇ - ၈၅)၊ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် ဒုတိယအဓိပတိ (၁၉၈၆ - ၈၈))
တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက် - တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်အဖြစ် ၃ထပ် စာကြည့်တိုက်အား ဇန်နဝါရီလ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီး၍ စာစောင်၊ စာအုပ်ပေါင်း ၁၀၆, ၀၀၀ ခန့် ထားရှိပြီးဖြစ်သည်။
Songkla မင်းသား တက္ကသိုလ်
Silliman တက္ကသိုလ် - မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ် သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Silliman တက္ကသိုလ်နှင့်သုတေသနနှင့်ပညာရေး ချိတ်ဆက်ချက်များ ရှိပြီးဖြစ်သည်။ 
တိုကျိုအဏ္ဏဝါသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ် - မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ် သည် တိုကျိုအဏ္ဏဝါသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လဲလှယ်သဘောတူညီချက်များ ရှိပြီးဖြစ်သည်။
အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ် - Purdue တက္ကသိုလ် ဖို့တ်ဝိန်း (IPFW)
ခွန်ကန် တက္ကသိုလ် (Khon Kaen University)
ဦးတိုးအောင် (စာရေးဆရာ ကုသ) - ခေတ်စမ်းစာပေ လှုပ်ရှားသူ
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - စာရေးဆရာ
တက္ကသိုလ် မင်းမော် - စာရေးဆရာ
ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညွန့် - စာရေးဆရာ၊ မြန်မာ့သမိုင်း ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်
ဝဏ္ဏကျော်ထင် ဗိုလ်ဗကို - စာရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်
ကထိက ဒေါ်မြင့်သန်း - မြန်မာစာပေ ပညာရှင်
Mohana Gill - အိန္ဒိယစာရေးဆရာမ
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မင်းတင်မွန် - စာရေးဆရာ
နန္ဒာသိန်းဇံ - စာရေးဆရာ
ဒေါက်တာ မန်းသက်စံ - စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး
အောင်သင်း - စာရေးဆရာ၊ တက္ကသိုလ်ကထိက
စိမ့်၊ (ပညာရေး) - တက္ကသိုလ်ကထိက၊ စာရေးဆရာမ
ဆရာဝန် တင်ရွှေ - စာရေးဆရာ၊ ဆရာဝန်တင်ရွှေ စာပေဆု တည်ထောင်သူ
တင်စိုး (ပါမောက္ခ) - စာရေးဆရာ၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ
နိုင်သက်လွင် - တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသက်နိုင်ဝင်း - နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး
ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညို - စာရေးဆရာ၊ အယ်ဒီတာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာမောင်သင်း - မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် - လူမှုကူညီရေးများအတွက် နိုင်ငံတကာမှ ဆုပေါင်း ၁၈ ခုတိုင်အောင် ချီးမြှင့်ခံရသူ
မာမာခိုင် - ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
စောထွန်း - ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
ထူးအိမ်သင် - တေးရေးတေးဆို
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ https://www.myanmar-edu.org/mueucap-university-mawlamyine
↑ Linkages & Partnerships | Silliman University (in en-US)။
↑ "Myanmar Seminar - Overseas Partner Institutions, University of Yangon and Mawlamyine University -：東京海洋大学" (in ja)၊ Myanmar Seminar - Overseas Partner Institutions, University of Yangon and Mawlamyine University -：東京海洋大学။
↑ Academic Exchange Agreements - 東京海洋大学။
↑ Mawlamyine University Law Department’s Ambitious Clinical Legal Education (CLE) Plan - BABSEACLE
↑ Myanmar — Football United
↑ An Evening Conversation with Mawlamyine University students – Fort Wayne Sister Cities
↑ มข.ต้อนรับ Mawlamyine University จาก เมียนมา
↑ Gill, Mohana (2013). Myanmar: Cuisine, Culture, Customs. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd. p. 41.
↑ Philosophy Writer Nanda Thein Zan Passes Away
↑ Meet Burma’s Next Cabinet
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မော်လမြိုင်_တက္ကသိုလ်&oldid=563493" မှ ရယူရန်
၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။